Muxuu Sheegay Hoggaamiyaha Ruuxiga Ee Daalibaan Oo Markii Ugu Horreysay Fagaaraha Lagu Arkay? - Xogside-news Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Muxuu sheegay hoggaamiyaha Ruuxiga ee Daalibaan oo markii ugu horreysay fagaaraha lagu...
Muxuu sheegay hoggaamiyaha Ruuxiga ee Daalibaan oo markii ugu horreysay fagaaraha lagu arkay?
Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Mullah Hebatullah Akhundzada ayaa maanta dadweyne kula hadlay magaalada dhacda koonfurta Afghanistan ee Kandahar, waa markii ugu horreysay uu goob fagaare ah kasoo muuqdo tan iyo markii uu xilkan qabtay sanadkii 2016-kii.
Sabtidii lasoo dhaafay, Hebatullah Akhundzada wuxuu booqday dugsiga Qur’aanka ee Daarul Culuum Al Xikmah halkaas uu kula hadlay ardey, wuxuu ku tilmaamay “Ciidamo iyo ardey geesiyeaal ah” sida laga soo xigtay cod laga soo duubay oo lagu baahiyay boggaga baraha bulshada ay kuleeyihiin Daalibaan.
Akhundzada wuxuu u duceeyay dadka reer Afghanistaan ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay ka qeyb qaatay dagaalkii ka dhanka ahaa waxaa uu ku tilmaamay “gaalada iyo kuwii dulmiga waday”
Cod 10 daqiiqo ah oo laga soo duubay hoggaamiyaha Daallibaan ayuu wuxuu ugu duceeyay shuhadada iyo dadkii ku dhaawacmay dagaalka Afghanistan, wuxuu ku tilmaamay guusha usoo hoyatay saraakiisha Daalibaan “Imtixaamkii ugu weynaa” ee dib logu dhisayo Imaaraatka Islaamiga ee Afghanistan.
“Aan duceysanno maadama aan guushan gaarnay, waxaan soo marnay imtixaam adag, Ilaahey ayaan weydisaneynaa in uu na siiyo awood xooggan” ayuu yiri hoggaamiyaha ururka Daalibaan oo labo bilood ka hor la wareegay awoodda.
Mullah Hebatullah Akhundzada wuxuu booqday iskuul ku yaalla magaalada Kandahar isaga oo ay wehliyaan kolonyo baabuur ah, waxaana si weyn loo adkeeyay amnigiisa, xilliggaas dadka looma ogoleyn in wax sawir ah ay ka qaadaan hoggaamiyaha Daalibaan.
Muddo dheer ayuu ninkaasi qarsoonaa oo aanan xog badan laga heli jirin arrintaas oo horseedday dood ku aaddan dowrka uu ka qaadan doono dowladda cusub ee Daalibaan ay u dhisi doonaan waddanka Afgaanistaan iyo weliba xitaa warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in ninkaasi uu geeriyooday.
Haybatullaahi Akhundzada ayaa noqday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Daalibaan shan sanadood ka hore markii ninka uu xilka kala wareegay ay duqeyn dhanka cirka ah ku dileen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka.
Hebatullah Akhundzada, weligii laguma arag goob fagaare ah tan iyo markii loo dhiibay hoggaanka Daalibaan, wax war ah lagama heynin halka uu ku noolaa, inkasta oo ay jireen warar sheegayay in fadhigiisu ahaa magaalada Kandahar ee dalka Afghanistan.
Akhundzada, aabihii wuxuu ahaan jiray sheekh, wuxuu kasoo jeedaa Kandahar oo ah qalbiga dhulka qowmiyadda Pahtu, waana halka uu kasoo faracmay ururka Daalibaan.
Waa kuma Hebatullah Akhundzada?
Hebatullah waxa uu dhashay 19-kii Oktoobar sanadkii 1967, sida lagu sheegay taariikhdiisa lagu shaaciyay barta internetka ee rasmiga ah ee ururka Daalibaan. Waxa uu ku dhashay degmada Bajway ee gobolka Gandahaar, waxa uuna ka soo jeedaa qowmiyadda Bashtuuga.
Waxaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xubnihii aasaasay xarakada Daalibaan waxaana kaaliye dhaw u ahaa aasaasaha urukaasi Mulah Maxamed Cumar.
Akhudnzada waxa uu ka qeybqaatay dagaalladii ka dhanka ahaa xukuumadda Afgaanistaan ee gacansaarka la laheyd Ruushka ee uu hogaamin jiray Maxamed Nuur Tarqi, taas oo xukunka la wareegtay bishii Abriil 1978-kii, sida lagu sheegay taariikhda rasmiga ah ee uu ururku shaaciyay. Ugu dambayntii waxa uu isaga baxsaday Afgaanistaan oo waxa uu galay Pakistan-ta dariska ah halkaas oo uu ku noolaa xero qaxooti oo ku taal xadka gobolka Balochistan.
Siday Taalibaan sida degdega ah ugu qabsanayaan dhulka Afgaanistaan?
Turkiga iyo Taalibaan miyaa laga dhex baxay si ay isu dagaalamaaan?
Ciidamada Mareykanka oo tagay Kabul si ay u badbaadiyaan shaqaalaha safaaraddooda
Waxaa la sheegay in dabayaaqadii 80-yadii uu ka qeybqaatay dagaalkii ka dhanka ahaa ciidammada Ruushka, iyadoo “mujaahidiinta” uu inta uu dagaalka Soofiyeetka ee Afgaanistaan socday waxbari-jiray, sida ay Taalibaan sheegtay.
1996-dii, hogaamiyihii hore ee Daalibaan, Mullah Maxamed Cumar, ayaa waxa uu u magacaabay inuu hogaamiyo maxkamadda milateriga ee Kabul, si uu u fuliyo shareecada Islaamka halkaas oo uu ka ciyaaray dowr muhiim ah, sida ay Taalibaanku sheegeen.
Markii uu Mareykanka xoogga ku galay waddanka Afgaanistaan dabayaaqadii sanadkii 2001, Akhundzada waxa uu ka qeybgalay dagaalka isagoo weliba hogaamiye ah, mararka qaarka ciidammada isku dubaridi jiray si ay Mareykanka ula dagaalamaan iyo ciidammada kale ee isbahaysiga, sida ay Daalibaanku sheegeen.
30-kii July 2005-tii, Akhundzada waxaa loo magacaabay kuxigeenka hogaamiyaha cusub ee ururkaasi Mullah Akhtar Maxamed Mansuur, kaddib markii la xaqiijiyay inuu dhintay aasaasihii iyo hogaamiyihii ururkaasi Mullah Maxamed Cumar.
22-kii bishii May 2015 waxaa hogaamiyaha Daalibaan Mullah Akhtar Maxamed Mansuur lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fulisay diyaarad dagaal oo Ameerikaan ah, iyadoo weerrarku uu ka dhacay meel u dhaw magaalada Quetta ee gobolka Balochistan ee koonfur galbeed waddanka Pakistan halkaas oo ku taal xadka Afgaanistaan.
Previous articleGolaha Deegaanka Ee Degmada Gebilay Oo Soo Bandhigay Qorshaha Miisaaniyadda 2022-Ka
Next articlemaxay tahay xaaladda horseeda in qofka mar kasta uu wehel ka dhigto teleefoonka, la’aantiisana uusan joogi karin?